Kuyini "Puppy Patrol"? Lena entsha, kodwa unqobile kakade uthando kwezingane eziyizigidigidi kusuka ochungechungeni iminyaka emithathu kuya kweyishumi ubudala opopayi mayelana bejabule, umxoxi abanonya Syke Ryder, oneminyaka abayishumi, ngakolunye uhlangothi, kufana kakhulu kontanga bazo, ngoba Zeke - futhi owenza ukubuyisa. Nokho, Ryder kuyinto umfana ezimele kakhulu futhi ehlakaniphile, ngubani yayinesithakazelo kakhulu ubuchwepheshe, elifuna nsuku zonke ukufunda okuthile okusha bese usize abangani bakho. Ngaphezu kwalokho, kuyinto umholi, eqinisweni, wakwazi ukuba babuthane ithimba eziyisithupha nomdlwana abanesibindi wokutakula, wasinikeza igama "Puppy Patrol". Kanye abatakuli elinesibindi Ryder kusiza wonke umuntu - kusuka kitten ephethwe ukugibela esihlahleni, ukuze abantu abalala e isitimela kumhambela. Ilungu ngalinye ekhethekile leqembu, wonke umuntu - uhlamvu eziyingqayizivele namakhono ehlukile, futhi nomdlwana futhi umholi wabo - elinamandla lethimba, okuyinto kweso fly to the usizo, uma kudingeka. "Nomdlwana Abanesibindi zonke konke amazinyo" - okungukuthi Isiqubulo zabo, futhi kungcono kakhulu ukuzijabulisa zezingane imidlalo. Chitha ephathini isitayela "Puppy Patrol", usuku lokuzalwa enganeni yakho khumbula.
ongakhetha kunokwenzeka for the holiday
Nokho, umbono ezinye izinto ezivelile, mhlawumbe, zaphumela. Usuku lokuzalwa oluhle in isitayela "Puppy Patrol" - umbono abazali zokudala futhi izingane zabo uthando ne ikhathuni. Manje kubalulekile ukuxoxa ngemininingwane nemigubho oluzayo: lena iphuzu elibaluleke kakhulu, ngenxa emkhathini iholide kuncike isimo bonke abahlanganyeli. Yiqiniso, izingane phezu isihloko party ufuna ukungena indima abalingisi bakho abayizintandokazi, bese kule badinga usizo.
Costumes nomdlwana puppy patrol - lesi isixazululo esiphelele: ungenza ngokwakho, abuke netitfombe kusukela movie, futhi kungenziwa yayala ehhotela. Akufanele yini ngenze ukuba linqume ngokuningiliziwe ngamunye wabo? Cha Udinga zidingida izingxenye ezithile kanye acabangele yokuthi izingane asebenzayo cishe wusizo, isibonelo, ukusebenzisa bese zigxuma zibheke buso stuffy noma iminqwazo, ngakho esikhundleni recreating amakhophi zokulingisa kusukela movie kungenziwa uwumnikazi wenkampani kanye timphawu (isibonakaliso noma izindondo ezinemibala nge amagama nomdlwana).
Akvagrim futhi zokubhukuda: ucabanga phezu yonke imininingwane
Elinye ikhambi yokuqala futhi zisebenza kahle ngeke akvagrim - Indawo edumile izingane ukuzijabulisa muva. Ngeke uthande izingane ukuthi lingaba yini ikhambi elula abadala abangakwazi awafikanga isikhathi ukuphuma amakhadibhodi muzzles besiyoba sikhulu imidlwane. Kodwa ungakhohlwa ukuthi izinhlamvu ikhathuni eyisithupha, futhi izivakashi kungenzeka. Kunconywa ukuba nginakekele nezinye izingubo, kanye ukusabalalisa izindima ukugwema izingxabano nokudelela. Ungakhohlwa ukuthi ithimba emangalisayo kukhona wababhukudi-intombazane, futhi uma phakathi izivakashi abasebasha kulindeleke amantombazane amabili ngaphezulu ukwenza ezinye izinto zokubhukuda a Heroine ozithandayo yochungechunge animated - Skye. Yilowo nalowo kubo uyokwazi ukukhetha ingubo ukunambitha. Ngakho, ngaphandle kosizo Abahlobisi professional, Singenza ephathini yelusuku lwekutalwa e isitayela "Puppy Patrol" ngezandla zakhe.
ukugubha umoya lokuzalwa
Nakuba zokubhukuda izingane, mhlawumbe ebaluleke kakhulu futhi kumnandi, futhi ukuhlela lokuzalwa zangempela ngesitayela "Puppy Patrol", kufanele kwenza umoya okhethekile thematic futhi ngosizo Decor ingaphakathi. Yenza uphawu, umuntu esikhombisa esakhiweni yindlunkulu onogada, hang ephrintiwe ozimele emibalabala cartoon, nemiklamo ezihlekisayo amafomu, isibonelo, amathambo noma izidladla kanye napkins nge izithombe umdlwane. Konke lokhu ubukhazikhazi kuzokusiza futhi wenze eningi izithombe ongenakulibaleka lokuzalwa ngesitayela "Puppy Patrol", isithombe esingezansi sibonisa ezinye izixazululo ezithakazelisayo for the holiday.
Omunye umqondo omuhle - ukwenza ukudla okulula, amakhukhi ifomu wethambo efanayo. Inqubo ukudla lezi gizmos kuyoba sikhumbuleke futhi kumnandi. Ekugcineni, futhi iningi amnandi uswidi - ikhekhe. Nge ezihlukahlukene zanamuhla ebanzi ukuthuthukiswa ubuchwepheshe kanye ngempela okunengqondo ontengo yakhe yayinqunyiwe, ungenza ikhekhe umhlobiso main holidi. Nalapha futhi, i-fantasy akufanele nomkhawulo: uzakubenze nge izibalo wamalungu eqembu, nge umfanekiso ifulege noma ngokuphelele uthatha uhlobo Zeke Ryder - zonke izinqumo zakho uyophumelela.
"Puppy Patrol": lokuzalwa. Ukuhola futhi imiklomelo
Esinye izingane okuthakazelisayo sika abagqugquzeli party futhi, kanyekanye, abazali umbuzo lokuzalwa - lokuzalwa ngesitayela puppy onogada, kanjani ukuchitha? elikhanyayo kakhulu, bejabule futhi owawuthandwa kakhulu nezingane zabo bonke ubudala ingxenye yiluphi uhlangothi, kuhlanganise party-uhlobo lokuzalwa ngesitayela "Puppy Patrol" - imiqhudelwano kanye imiklomelo.
Uma ungakabi wakwazi ukunikeza indima lokuzalwa Ryder sika, ungajahi, ngoba kungaba izindlela ewusizo kakhulu okuholela. Uma umninikhaya akuyona professional, ezinye izimenywa ezingu / izihlobo / nengangibajwayele, sinake indlela alwa ngayo izingane, kanye aqamba, ngoba lokhu izilaleli akuqinisekile kakhulu, kudinga indlela ekhethekile, ngisho amakhono nengxabano. Kuyoba ukusabalalisa nendima evelele futhi uqondise izenzo guys like Ryder uphatha nomdlwana ukutakulwa, futhi ngeke umklomelo imiklomelo ngokuwina nokubamba iqhaza, uma Zeke ikhuthaza iqembu umsebenzi omuhle. Futhi imiklomelo ngokwabo ephelele amanothibhuku ejwayelekile, amapensela, ama-albhamu, amaketanga ayisihluthulelo, odonsa, nezinye izinto ezidingekayo.
Londoloza isabelomali ezintweni kancane
Uma uhamba kuze kube uhlelo ukhuthaze ngokucophelela, ungakwazi ukuthenga CD ne uchungechunge entsha "Puppy Patrol" stickers evumelanisiwe, Umbala izincwadi. Ungakhohlwa ukuthi ngaphezu abawinile futhi abahlanganyeli kufanele ikhuthazwe. Musa ngempela buy lonke umklomelo - kuyoba amabhola ngokwanele ezijabulisayo ngakho izingane. "Cheers" angaya amaphuzu uhlelo (kungabuye ngokuthi kuyo yonke), futhi imiphumela yonke imincintiswano usebenzisa lesi simiso kungenzeka ukukhomba umholi phakathi izivakashi noma ithimba ngokuwina.
Senza izinhlelo yokuncintisana
Ngokuqondene izinhlelo yokuncintisana ngokwabo, kukhona futhi asikho isidingo excel. Ngaphandle umzamo omkhulu, ungakhetha imincintiswano, ke kufanelana ngokuphelele zingene umqondo lomkhosi. Ngokwesibonelo, ungenza izimoto ingane ngayinye, olufana nalolo babe nomdlwana e cartoon, nje nokuprinta izithombe zabo futhi enamathiselwe ayindilinga encane. Bese - iso lakho lengqondo futhi isikhala esitholakalayo egumbini: Hlela umjaho iqembu noma Ukuma ngabanye. Iya esitolo isilwane ngoba amathambo plastic, noma kuthathe isikhathi eside lekubazeni okuthile okunjengesizwe amakhadibhodi obukhulu. Lezi zinto ezincane iyoba kanye Decor, futhi, isibonelo, ingxenye ngezintambo edonsa (ungakwazi ngesankahlu ithambo maphakathi).
Yenza ambalwa mikhondo ozimele kusukela opopayi nge big painted namaqhawe futhi unike izingane umsebenzi ukupenda izithombe ngamehlo akhe uvaliwe, akunika ithuba pre ukubheka ngaphakathi nje imizuzwana embalwa, noma ukwenza iphazili eyodwa, futhi guys amaqembu noma ngamunye kuyodingeka ukuba babuthane isithombe ngesikhathi. Kubathandi ukucula zingatholakala lokususa ingoma "isikwati Yethu 'ukuze guys wenza Karaoke yangempela.
Sinake zonke guys: lokhu kubalulekile
Ukuze abalandeli real yochungechunge animated ikhambi ekahle kungaba ukwenza Imibuzo ukuthi imibuzo zisekelwe imishwana nomdlwana futhi Ryder noma izikhonzi iziqephu kunazo yesiteleka. Qiniseka ukuba banake guys namahloni kakhulu. Uma kwenzeka kukhona umzali, makangilandele ukusiza ingane iqhaza emncintiswaneni, uma kungenjalo, usizo bebengaba yena senkosi noma nabo abaphezulu. Ngisho umuntu onesizotha kakhulu kakhulu ufuna ukuthola indima bese uwine umklomelo ohahelwayo.
Usuku lokuzalwa oluhle in isitayela "Puppy Patrol" simo okungase kwenziwe ngezindlela ezahlukene kuye ngokuthi yobudala, indawo kanye nezinye izinto eziningi - umqondo omuhle. Ungakhetha oda ehlukene obulukhuni kanye nokuncintisana ngekuya yobudala kwezingane, nangezindlela ezihlukahlukene ezithile, imininingwane ukusatshalaliswa izindima, kodwa yinye into ekhona njalo - izingane abawaziyo futhi sithanda + abantwana ezinhle ukukhombisa iholide ezinezihloko efanayo ongenakulibaleka. Futhi sehlo lokhu akusho ukuthi ukwenza kakhulu, bathi, itafula okunomsoco - kuyoba inkambo main eyodwa kuphela futhi amaswidi, ngoba izingane bakhathazekile asebenzayo imidlalo, ukudansa, izingoma, imincintiswano.
Izinkundla ngoSuku Yathishela. umcimbi Esibalulekile esizinikezele Day Teachers '
Izixazululo nebulizers isifutho: aphathe imikhuhlane